Ceylon သစ်ကြံပိုးခေါက် - Megafit Nutrition
Home Shop Ceylon သစ်ကြံပိုးခေါက်
အမျိုးအမည်နံပါတ : 000-04.
အမျိုးအစားများ: ဆေးဖက်ဝင်အပင်များ၊, အော်ဂဲနစ် Ceylon သစ်ကြံပိုးခေါက်.
အစွမ်းထက် ဓာတ်တိုးဆန့်ကျင်ပစ္စည်းနှင့် ရောင်ရမ်းမှုလျော့ကျစေခြင်း
ကျန်းမာရေးနှင့်ညီညွတ်သည့် သွေးတွင်းသကြားဓာတ် ပမာဏ၊ ဦးနှောက်လုပ်ဆောင်ချက်နှင့် နှလုံးကျန်းမာရေးကို ပံ့ပိုးပေးခြင်း
ကျန်းမာရေးနှင့်ညီညွတ်သော ဇီဝဖြစ်စဉ်ကို ပံ့ပိုးပေးခြင်း
အော်ဂဲနစ်ဖြစ်ခြင်း – သဘာဝအတိုင်းမဟုတ်သော ပါဝင်ပစ္စည်းများ မပါဝင်ခြင်း
အမျိုးအစား : Tablet
တိုက်ကျွေးရမည့် ပမာဏ :2Tablets
Ceylon Cinnamon from MegaFit Nutrition is made with Organic & Natural ingredients. Supports healthy Blood Sugar, promotes Heart health, shows promise for weight management, may be effective for Joint Pain and isapotent anti-inflammatory.
Turmeric 750mg with Bioperine